Uyicacisa njani ividiyo yeYouTube kwiAPA? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 300
YouTube Akusekho nje ukuba sisidlali sevidiyo somculo esasisesekuqaleni kwayo, phaya ngo-2007. Ngoku izixhobo zayo zoncedo zihambela phambili kakhulu kwaye sisixhobo sabasebenzisi abaninzi.
Ngokusebenzisa yale nethiwekhi yoluntu Singakhangela ulwazi lwalo naluphi na uhlobo kwaye sinokubona kuphela iindaba okanye silandele kwiminyhadala yomzuzu wokugqibela, kodwa sinokufumana ulwazi kumaxwebhu okanye iinkqubo ezizodwa kunye nezifundo ezigqityiweyo ezichaziweyo nezixineneyo kwividiyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, oku kube luncedo olukhulu kubafundi kwanakubasebenzi abafuna okuthile imvelaphi okanye isalathiso ngokukhawuleza ngaphandle kokushiya ikhaya, kodwa ngokucacileyo kwaye nokuthobela imigaqo-nkqubo yezomthetho, ezi kufuneka zivunywe.
Imigangatho yeAPA Zezona fomathi zaziwayo kwihlabathi liphela zokubhala iingxelo, izincoko, amaphepha, iingxoxo, phakathi kwamanye amaxwebhu; Babengamaphupha amabi kubafundi abaninzi kule minyaka idlulileyo, ngakumbi ngenxa yokuba bengqongqo kangakanani.
Ezi zikhokelo, nangona kunjalo, ziye zasinda kwindaleko kwaye ukuqhubela phambili kwezobugcisa Kwaye kuye kwafuneka bahlengahlengise ukuvela kweePDF, iincwadi ezikwi-Intanethi kunye neemagazini ezinokukhutshelwa, kunye nemithombo evela kwiwebhusayithi, kubandakanya neYouTube.
Abo bayaziyo imigaqo kwaye khange bayisebenzise ixesha elide, bayazibuza ukuba ikhankanywa njani ividiyo yeYouTube kwaye kuvakala kuyinto engaqhelekanga ukucinga ngayo.
Ukucaphula ividiyo yeYouTube Kumsebenzi ophantsi kwemigangatho ye-APA, kuya kufuneka uthathele ingqalelo idatha evela kumthombo, umzekelo, kufuneka ulazi igama lombhali (enye yevidiyo, hayi umsebenzisi), igama leakhawunti yejelo, umhla wokupapashwa (unyaka, inyanga nosuku), isihloko sevidiyo kunye nekhonkco elixineneyo.
Kulo myalelo ukhankanywe ngasentla, Uyakwenza ireferensi yakho ngaphandle kwengxakiKuya kufuneka ukhumbule ukulandela onke amanyathelo kwaye ngokuqinisekileyo ubeke igama elibuyisiweyo ngaphambi kwekhonkco, kwaye oku akusetyenziswanga kwiYouTube kuphela, kodwa nakwezinye iisayithi ezinje ngeVimeo okanye iDailyMotion.
Kwafika kwiminyaka embalwa edlulileyo ngaphezu kweMigangatho ye-APA Bahlaziya imigaqo yabo kwaye babandakanya iYouTube phakathi kwabo bathandana. Njengoko bekutshiwo ngelo xesha, yayisele iyimfuneko, njengoko iimfuno zokuqeshwa zazisonyuka.
Ngokukwanjalo, banokubakho kokuqeshwa kwamanye amaphepha ewebhu okanye iinethiwekhi zentlalo, ngokunjalo YouTube Into esoloko icetyiswa kukuqinisekisa ulwazi ngomthombo wesibini kwaye ihlala iqinisekisiwe okanye imijelo enzulu, ukuze kungabikho naluphi na uhlobo lokuphazamiseka.
Ngale ndlela, sinokubonisa ukuba kuye kuthi ga Imigangatho yeAPA Baye bamkela inkqubela phambili yedijithali kwaye bayiphucule, ngokungathi kunjalo, imithetho yabo, elawule imisebenzi, iingxelo zethisisi kunye nezinye iminyaka emininzi kwaye ngoku, iya kuqhubeka ngendlela efanayo.
1 Imigangatho yeAPA
3 Ukuvela kwemigaqo